Nkwalite: Soro Azụmaahịa Obodo Na-akwagharị Site Nchọpụta | Martech Zone
ProOpinion: Soro Otu Azụmaahịa Na-akwalite Nchọpụta
Saturday, April 25, 2015 Sunday, Eprel 26, 2015 Douglas Karr
Otu n'ime mgbanwe anyị na-ahụ na ntanetị bụ na saịtị ndụmọdụ n'efu na freemium na-aga n'ihu na-agba mbọ na ogo ọdịnaya ha na izi ezi nke ozi ha na-eweta. N'ihe banyere mkpebi ire ere, anyị na-aga n'ihu ịhụ na ụzọ ahaziri iche na-arụpụta ezigbo nsonaazụ. Ọ dị oke mkpa maka ndị ndụmọdụ ma ọ bụ ndị na-ere ahịa ka ha mụọ ọdịbendị, akụrụngwa na ebumnuche nke azụmaahịa tupu ha atụpụta atụmatụ ma ọ bụ ikpo okwu. Otu nha adabaghị niile.
ProOpinion na-enye ihe pụrụ iche, ọdịnaya nyocha ọdịnaya, enweghị ya ebe ọzọ n'ihi na ProOpinion bụ isi mmalite nke nyocha ahụ. Ọdịnaya bara ụba, dị mfe ịnweta, yana nke kachasị mkpa, bara uru.
Ndi otu ProOpinion raara onwe ha nye oganiru, kwudosiri ike na iweputa ihe ohuru, ma burukwa ntughari ha n’achụma ahia kacha mma. Maka ụlọ ọrụ gburugburu ụwa, nzaghachi sitere n'aka ndị mmadụ na-eji ngwaahịa na ọrụ ha dị mkpa mgbe ha na-anwa idebe ndị asọmpi na enyo anya azụ ha. ProOpinion na-enye ndị otu ohere imetụta ngwaahịa na ọrụ ọdịnihu site na ịkekọrịta echiche na nyocha n'ịntanetị.
ProOpinion nweere onwe ya isonyere mana ndị otu nwere ike irite obere obere ihe ma melitekwa ebe ahịa. Fọdụ na-ewu ewu ụgwọ ọrụ akwụ gụnyere Amazon.com Onyinye Kaadị na iTunes Onyinye Kaadị. I nwekwara ike inye onyinye gị na American Red Cross. Survey a na-akpọ na-emailed ka ndị otu ma ọ bụ na ha nwere ike nbanye na akaụntụ ha na proopinion.com isonye na online nnyocha.
Ọchịchọ gị maka nchọta metụtara gị na-akwụsị ebe a - sonyere ProOpinion taa.
Nke a bụ mkparịta ụka nkwado m dere m n’aha ProOpinion.
Tags: obodo azụmahịanyocha azụmahịankwụsịobodo nyocha
Ndepụta nke Ngwaọrụ Ntanetị Dijitalụ Na-enweghị Ntanetị 29